FANOVANA GOVERNEMANTA : Voaporofo ny maha Repoblika kiantranoantrano | NewsMada
FANOVANA GOVERNEMANTA : Voaporofo ny maha Repoblika kiantranoantrano
Tsy nihemotra tamin’ny fanovana governemanta ny avy eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika. Voaporofo amin’izao zava-miseho izao anefa, fa manjaka ny kiantranoantrano sy ny fifampiarovana amin’ireo heverina ho nanao ny tsy nety teo anivon’ny fitantanana ny tany sy ny firenena…
Tsy araka ny nandrasana! Izay no azo amintinana ny fanovana ny governemanta, omaly. Raha noheverina fa fanovana tanteraka ny governemanta no nandrandrain’ny vahoaka. Sarintsariny ihany no niseho, raha ny didim-panjakana nivoaka nanendrena ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta. Voaporofo ankehitriny ny maha fitondrana kiantranoantrano amin’izao fitondrana mijoro tarihin-dRajaonarimampianina Hery izao, araka ny nambaran’ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi).Tsy voakitika amin’ny toerany, ireo heverina fa nifandray tendro sy nanao akondro mifanakon-dravina tamin’ireny “Raharaha Razaimamonjy” ireny, eny fa na ny Praiminisitra izay tokony ho voasaringotra tamin’iny raharaha iny aza, azo antoka fa tsara mpiaro, amin’izao fotoana izao. Ny mahasadaikatra amin’izao fanovana governemanta izao, mbola nitazoman’ny filoham-pirenena ireo heverina fa tsinay kely manamaimbo ny atiny, amin’izao fitondrana izao. Tafiditra amin’izany ireo heverina fa manohintohina ny tombontsoam-bahoaka amin’ny karazana fanodinkodinam-bola miseholany teto amin’ny tany sy ny firenena. Anisan’ireo efa nifety mihitsy ny sasany, tafiditra amin’izany ny minisitra Andriamiseza Charles, Andriamanarivo Lalatiana, ary Rakotovao Rivo, izay anisan’ny nitady hevitra tamin’ny fitsoahan’ilay mpanolotsain’ny filoham-pirenena, izay voasaringotra tamin’ny raharaha goavana momba ny resaka fanodinkodinam-bola. Anisan’ireo tafaverina amin’ny toerany teo aloha, Rahajason Harry Laurent, izay minisitry ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ireo andrim-panjakana.
Mila mitandrina ny fitantanam-bolam-panjakana
Tsy mbola fantatra mazava ny tena antony nanovana ny governemanta, raha toa ka ireo noheverina fa nanao ny tsy mety no mbola voatazona amin’izao fitantanana ny raharaham-panjakana izao. Fotoana tokony ho nampisehoan’ireo mpitondra ny fanesorana ny fitondrana kiantranoantrano sy nanao ny tsy mety, saingy mbola tafajanona ireo mpiara-misaosy, amin’ny fizarana ny mamy eo anivon’ny fitantanana. Mila arahi-maso fatratra, araka izany, ny volam-bahoaka, manoloana izao fakan’ny Filohampirenena indray ireo ekipany ireo. Ho hita eo ny tohiny raha hitohy tokoa ny fitondrana kiantranoantrano na hisy fiovam-penitra ny fitantanana ny raharaham-panjakana.
Raha ny tsy fetezan-javatra miseholany eto amin’ny Firenena, tsy tokony ho ireo fotsiny ny minisitra nosoloina tamin’izao fanovana governemanta izao. Araka ny didim-panjakana nivoaka omaly, foanana ary dia foana ireo fepetra entin’ny didim-panjakana laharana faha-2016-265 tamin’ny 15 avrily 2016, ary tendrena mpikambana ao amin’ny governemanta kosa, ny minisitry ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoran’afo, Rasoloelison Lantoniaina; ny minisitry ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ireo Andrim-panjakana, Rahajason Harry Laurent; ny Sekreteram-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena miadidy ny Zandarimariam-pirenena, Randriamahavalisoa Razafindramaitso Girard; ary ny sekreteram-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny miadidy ny Fiaraha-miasa sy ny Fampandrosoana, Rafatrolaza Bary Emmanuel. Nofoanana ireo fepetra rehetra teo aloha, mifanohitra amin’io didim-panjakana navoaka io. Ho an’ny asa fanaovan-gazety manokana, mahavelom-panontaniana sy fanahiana ny mety hoavin’ny asa fanaovan-gazety malagasy. Ho an’ity minisitra hiandraikitra indray ny minisiteran’ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ireo Andrim-panjakana ity, izay fantatra amin’ny famadibadihana palitao. Anisan’ireo minisitra notendren’ny filohan’ny tetezamita, Andry Rajoelina, saingy nitodi-damosina azy ireo. Naleony nisafidy ny hiara-dalana amin’ny ekipan’ny HVM, amin’izao fotoana izao. Izy anefa, anisan’ireo niady mafy tamin’ny lalàn’ny famoretana tamin’izany fotoana izany. Andrasana, araka izany, izay politikam-pitantanana tanterahin’ity minisitra ity, indrindra eo amin’io raharaha nampifanolana amin’ny tontolon’ny asan-tserasera io. Anisan’ny goavana amin’izany ny an’ny mpanao gazety. Araka ny fantatra, tsy ho ela dia ho tapitra ny fe-potoam-piasan’ireo eo anivon’ny Holafitra, ka ho hita eo ny tohiny…